UWislawa Szymborska: ungubani futhi ubhale ziphi izincwadi | Izincwadi Zamanje
Umthombo we-Wislawa Szymborska: the2banks
UWislawa Szymborska ungomunye wezimbongi ezingaziwa kakhulu emhlabeni, yize, ngo-1996, wawina iNobel Prize for Literature. Ngeshwa, asisakwazi ukuthembela ebukhoneni bakhe, njengoba adlula emhlabeni ngo-2012, kepha umsebenzi wakhe uyaqhubeka nokubekezelela ngokuhamba kwesikhathi futhi nakanjani wake wakuthola esikhathini esithile.
Kodwa, Wayengubani uWislawa Szymborska? Yini ayibhalile? Kungani udume kangaka ezweni lakho nakwamanye amazwe? Kukho konke lokho, nokunye okuningi, yilokho ozokwazi namuhla.
1 Ngubani Wislawa Szymborska
2 UWislawa Szymborska ezincwadini
3 Wabhala ziphi izincwadi
Ngubani Wislawa Szymborska
UWislawa Szymborska akulona igama lakhe ngempela. Igama eligcwele lale mbongi kwakungu UMaria Wislawa Anna Szymborska. Wazalelwa ePrownent ngo-1923 (njengamanje yilokho esikwaziyo njengeKórnik, ePoland).
Ubaba wakhe wayengumphathizikhonzi ku-Count Wladyslaw Zamoyski, umnikazi wedolobha laseKórnik, kwathi lapho eshona ngemuva konyaka, wayesho ukuthi umndeni kufanele uthuthele eTorun, lapho uWislawa Szymborska akhulela khona.
Wayenobuntu obukhulu, kangangoba, lapho eneminyaka emihlanu, ngenkathi efunda esikoleni, waqala ukubhala izinkondlo. Kumele futhi kuthiwe wonke umuntu emndenini wakhe wayengabafundi abanobuhlakani, futhi babejwayele ukufunda nokuphikisana ngezincwadi. Ngaphandle kwalokho, wayene "mklomelo." Futhi ukuthi zonke izinkondlo zikaWislawa Szymborska zadlula ezandleni zikayise, futhi uma ezithanda, wabe esemnika uhlamvu lwemali njengomklomelo, ayengathenga ngawo noma yini ayifunayo.
Ngo-1931 kwadingeka baphinde bathuthe futhi, yize ebhalise esikoleni sezindela eKrakow, akazange aziqede izifundo zakhe lapho. Ngalesi sikhathi okunye kokuhlukumezeka okwamumaka kwaba, ngaphandle kokungabaza, ukushona kukayise. Umndeni awuzange uphinde unyakaze, kepha bahlala eKrakow lapho, ngemuva kweminyaka embalwa, neMpi Yezwe Yesibili, ngo-1940, bahlukunyezwa yiPoland yaseJalimane.
Ngenxa yalokhu, Abantu basePoland abakwazanga ukuya ezikoleni zomphakathi. Kodwa lokho akuzange kumvimbe uWislawa Szymborska onqume ukuqhubeka nezifundo zakhe futhi wakwenza lokho esikoleni esingaphansi komhlaba, eWawel Castle. Ngakho-ke, ngo-1941 waqeda izifundo zakhe zamabanga aphakeme.
Eminyakeni emibili kamuva, waqala ukusebenza kojantshi, ngaleyondlela egwema ukudingiselwa eJalimane ukuyosebenza ngenkani. Futhi ngalesi sikhathi usebenzise sonke isikhathi sakhe enza imifanekiso yencwadi yesiNgisi futhi ebhala zombili izindaba ezimfushane nezinkondlo.
Ukuphela kweMpi Yezwe Yesibili kwasiza uWislawa Szymborska ukuba abhalise eJagiellonian University eKrakow, lapho akhetha khona izincwadi zasePoland kodwa wagcina eshintsha imikhakha yezenhlalo. Ngaphandle kwalokhu, akazange akwazi ukuqeda izifundo zakhe, kepha wayeka ngo-1948.
Kodwa-ke, ngalesi sikhathi esifushane somfundi, wazishicilela ezinye izinkondlo emaphephandabeni nakomagazini.
UWislawa Szymborska ezincwadini
Inkondlo yokuqala ethi Wislawa Szymborska eyashicilelwa yayingo-1945, ekwengezelweni kwemibhalo kwi-Dziennik Polski yansuku zonke. Isihloko sayo, ngifuna igama (Szukam slowa). Futhi lokho bekungasho nje ukuqala kwakhe, kepha nokuthi bavule iminyango yezinkondlo zakhe emaphephandabeni nakwabezindaba bendawo.
Ngo-1948, lapho eyeka ekolishi ngoba engenayo imali yokuyikhokhela, waqala ukusebenza njengonobhala kamagazini wezemfundo, ikakhulukazi iphephandaba elalimnikeze ithuba lakhe lokuqala, iDiennik Polski. Futhi, ngasikhathi sinye lapho wayengunobhala, wasebenza futhi njengomfanekiso nomlobi wezinkondlo, njengoba aqhubeka nokushicilela izinkondlo.
Eqinisweni, ngo-1949, wayesenalo iqoqo lakhe lokuqala lezinkondlo.
Ngokushesha ngemuva kwalokho, ngo-'52, wakhipha elinye iqoqo lezinkondlo, uDlatego zyjemy (Yingakho siphila), iningi labo ligcwele imibono yakhe yezepolitiki. Futhi ngaleso sikhathi waba yilungu lePolish Workers 'Party, enomuzwa omkhulu wobusoshiyali ukuthi akaphendukelanga kulelo qoqo lezinkondlo kuphela, kodwa nakwelilandelayo, ngo-1954, uPytania zadawane sobie (Imibuzo ibuziwe ngokwakho).
Manje, yize ayengusoshiyali, eminyakeni emithathu kamuva washicilela iqoqo elisha lezinkondlo, Walanie do Yet (Call to the Yeti) lapho akhombisa khona ukudumazeka okucacile futhi wephule leyo mibono yobukhomanisi, nokuthi wayeseshintshe kanjani emcabangweni wakhe, engagculisekile ngokuthi lolo hlobo lwezepolitiki lusebenza kanjani.
Ngaphezu kwalokho, wakhombisa ukukhathalela isintu, ikakhulukazi uStalinism, waze wanikezela inkondlo kuStalin lapho amfanisa khona nendoda eyisithwathwa enengekayo (iYeti). Kuze kube yileso sikhathi wabalahla ubukhomanisi nobusoshiyali wathi wenqaba leyo misebenzi emibili ayishicilela futhi wayengasafuni ukuzwa ngayo futhi.
Wabhala ziphi izincwadi
Kumele ukubheke lokho UWislawa Szymborska uqale ukubhala eneminyaka yobudala eyi-5. Kuthiwa ushiye izinkondlo ezingaphezu kuka-350 ezibhaliwe. Ezincwadini, wabhala izinkondlo ezingaphezu kwe-15 kanye nephrozi. Kepha yize yayizala kangaka, asinakusho ukuthi yayidume umhlaba wonke, empeleni yayingafani nalokho. Babemazi kancane ezweni lakhe, kepha hhayi ngaphandle kwalo. Njengoba kwakwaziwa kakhulu, kwakungeminye imisebenzi yakhe: ukugxekwa kwemibhalo nokuhumusha.
Ngakho nini ngo-1996 bamnika umklomelo weNobel for Literature, uWislawa Szymborska wamangala, kokubili ngaye nakubo bonke labo ababengamazi kuze kube yileso sikhathi. Vele, kwakungewona ukuphela komklomelo awunikezwa. Phambilini ubevele enabanye, njengoMklomelo woMnyango Wezamasiko wasePoland, awunikezwa ngo-1963; uMklomelo weGoethe, ngo-1991; noma umklomelo kaHerder nokwamukelwa njengoDokotela oHloniphekile Wezincwadi yi-Adam Mickiewicz University of Poznan, ngo-1995.
U-1996 waba unyaka omuhle kuye, hhayi kuphela ngenxa yeNobel Prize, kepha futhi ngoba wanikezwa iPEN Club Prize yasePoland.
Eminyakeni eyalandela, ngo-2011, wathola omunye wemiklomelo yakhe yakamuva, i-Orla Bialego Order (i-Order of the White Eagle), okuyinhlonipho ephakeme kakhulu eyatholwa ePoland.
ESpain ungathola ingxenye yomsebenzi wakhe ohunyushiwe, ezinye zezincwadi yilezi:
Indawo enenhlamvu yesihlabathi.
Uthando olujabulisayo nezinye izinkondlo.
Ekugcineni, sikushiya ne- enye yezinkondlo zikaWislawa Szymborska.
NOMA ngubani owaziyo ukuthi ukuphi
wobubele (fantasy of the soul),
"Akaxwayise!" , Akaxwayise!
Ake ngiyicule kakhulu
futhi ngidansa ngathi ngilahlekelwe yingqondo
jubilant under the willow dhaifu
Ephakade esengozini yokwehla izinyembezi.
Ngifundisa ukuvala umlomo
wesibhakabhaka esigcwele izinkanyezi,
Etshanini besikhathi esidlule,
lapho, wageza elangeni kuze kufike entanyeni,
uqamba amanga ngenkathi umoya udansa
(inkosi yomdanso wezinwele zakho).
Ukunikezwa kokuthi "Phupha".
kubantu asebekhulile abasemakhaya asebekhulile
afe. Khonzani nina
vela ngaphandle kwezethenjwa
azikho izicelo ezibhaliwe.
Kuzocekelwa phansi amaphepha
ngaphandle kokuvuma ukuthi utholile.
NGEZETHEMBISO ZOMYENI WAMI
-Ukuthi ukukhohlisile ngemibala
wezwe elinabantu abaningi, ngokuxokozela kwalo,
nge-couplet evela efasiteleni, nenja
ukuthi awusoze waba wedwa
ebumnyameni, ethule futhi ephefumula kanzima.
Ubusuku, umfelokazi Wosuku.
Isiko. Elzbieta Bortkiewicz
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » UWislawa Szymborska
UNoel perez kusho
Ngingomunye walabo abakuthola sekwephuzile futhi abangayekanga ukuba ngomunye wezimbongi engizithandayo. Ziningi izinkondlo ezingikhangisile, kodwa eyokuqala engishayile ngokungangabazeki iThe Number Pi.
Phendula uNoel Pérez